आईपीओ | Ratopati
जहाँतहीँ आईपीओको चर्चा, किन यति धेरै आकर्षण ? access_timeमाघ ८, २०७७
पछिल्लो समय आम सर्वसाधारणको आईपीओप्रतिको क्रेज कतिसम्म छ भन्ने उदाहरण चन्द्रागिरी हिल्स र इन्फ्रास्टक्चर बैङ्कको आईपीओको चर्चाले पुष्टि गर्छ । सेयर बजारप्रति खासै रुचि नराख्ने र जानकारीसमेत नभएकाहरु पनि अहिले आईपीओ भर्न तँछाडमछाड गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जा...
आईपीओमा आकर्षण बढ्दै, आवेदक संख्या एक वर्षमा दोब्बर नाघ्यो access_timeअसोज २६, २०७७
काठमाडौं । प्राथमिक बजारमा शेयर खरिद गर्न चाहने आवेदकको संख्या आकाशिँदै गएको छ । बजारमा सूचीकृत हुने प्रत्येक साधारण निष्कासन (आईपीओ/एफपीओ) मा आवेदन गर्नेको संख्याले नयाँ रेकर्ड कायम गर्न थालेको हो । नयाँ निर्जीवन बीमा कम्पनीमध्ये अन्तिम पटक साधारण शेयर निष्कासन ग...
तीन कम्पनीको ९३ लाख कित्ता आईपीओ खुला, कुनमा कति लगानी गर्ने ? access_timeभदौ ४, २०७७
काठमाडौं । बजारमा ३ वटा कम्पनीका प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) खुला भएका छन् । जीवनबीमा कम्पनी, लघुवित्त वित्तीय संस्था र हाइड्रोपावर क्षेत्रका १÷१ समेत गरी तीनवटा कम्पनीका आईपीओहरु बिक्रीका लागि खुला भएका हुन् । जीवनबीमा क्षेत्रबाट रिलाइन्स लाइफ इन्स्योरेन्स...